Lufthansa mezuru mmezu nke mmụba isi obodo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Lufthansa mezuru mmezu nke mmụba isi obodo
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Deutsche Lufthansa AG akwụghachila ego ruru ijeri euro 1.5 nke esitere na ntinye aka Silent I nke Economic Stabilization Fund nke Federal Republic of Germany (ESF).
Mmụba nke isi obodo Lufthansa gara nke ọma - a na -ere ahịa ọhụrụ ka ọ dị taa.
Ego a na -enweta site na mmụba nke isi obodo na -abanye ozugbo na ịkwụghachi ego nkwụsi ike nke German Economic Stabilization Fund (ESF).
Nkwụghachi zuru ezu na nkagbu nke ESF Silent nsonye I na II mere atụmatụ tupu ngwụcha afọ.
Site na mmechi taa nke mmụba nke isi obodo Deutsche Lufthansa AG akwụghachila ego ruru ijeri euro 1.5 nke esitere na ntinye aka Silent I nke Ego mmezi akụ na ụba nke Federal Republic of Germany (ESF). Site na nke a, Deutsche Lufthansa AG edozila akụkụ dị ukwuu nke usoro nkwụsi ike ugbu a ESF. Emeghachiri ụgwọ a n'ụzọ dị mkpa karịa ka eburu n'uche.
Carsten Spohr, onye isi oche nke Deutsche Lufthansa AG
Mkpokọta ego sitere na mmụba isi obodo ruru ijeri euro 2.162. A na -ere ahịa ọhụrụ na Frankfurt Stock Exchange kemgbe taa. A na -emecha mmụba nke isi obodo.
Carsten Spohr, onye isi ala Deutsche Lufthansa AG ekwu, sị:
“Anyị nwere ekele nke ukwuu Deutsche Lufthansa AG ejiri ego ụtụ kwụsiri ike n'oge ndị kacha sie ike. Nke a emeela ka o kwe omume ịchekwa ihe karịrị ọrụ 100,000 wee chekwaa ha maka ọdịnihu. Taa, anyị na -edobe nkwa anyị ma na -akwụghachi nnukwu ego nkwụsi ike tupu oge a tụrụ anya ya. Anyị na -enwekwu obi ike maka ọdịnihu. Ọtụtụ mba na -emepe oke ala ha, na arịrịọ maka njem ikuku, ọkachasị ndị njem achụmnta ego, na -eto kwa ụbọchị. Ka o sina dị, gburugburu maka ụgbọ elu ka bụ ihe ịma aka. Ọ bụ ya mere anyị ji agbanwe agbanwe na ịga n'ihu na mgbanwe anyị. Ebumnuche anyị agbanwebeghị: otu Lufthansa ga -aga n'ihu na -agbachitere ọnọdụ ya n'etiti ndị otu ụgbọ elu ise kacha elu n'ụwa. ”
N'ịgbaso ụgwọ ịkwụ ụgwọ maka ntinye aka Silent I nke mbụ, ụlọ ọrụ ahụ na -ezube ịkwụghachi ntinye aka Silent II nke ijeri euro 1 tupu ngwụcha afọ 2021 yana ịkwụsị akụkụ ejighị ya na ntinye aka Silent I tupu ọgwụgwụ nke 2021. Mbinye ego KfW nke Enwetalarị otu ijeri euro tupu oge emebere (February 1). ESF, nke nwere 2021% nke isi obodo ugbu a, agbaala mbọ na ọ gaghị ere oke ọ bụla na ụlọ ọrụ n'ime ọnwa isii ka emechara mmụba nke isi obodo. Agbanyeghị, ire ere nke osisi ga -agwụcha karịa ọnwa 14.09 ka emechara mmụba nke isi obodo, ma ọ bụrụhaala na Companylọ ọrụ akwụghachila Mgbakọ I na II nke Silent dị ka emebere ya na ezutezu nkwekọrịta ahụ.
Agha agbachitere ndị mmadụ na Myanmar: Onye ọrụ gọọmentị ...
Oku siri ike maka nnabata na ọkwa niile na UNDP...
Njem nlegharị anya anụ ọhịa: Mkpa maka akụkọ ndị mara mma
Ụgbọ elu ọhụrụ si Miami gaa Chetumal na ụgbọ elu America
Kedu ka esi gwọọ ehighi ura na mgbochi nchegbu?
Ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ ewepụtara na China na-anata…
Ọgwụ mgbochi COVID-19 nke ọgbọ ọhụrụ
Slovenia ga-abụ isi obodo njem nlegharị anya ọhụrụ…
Egburu mmadụ abụọ na ebe ntụrụndụ Hyatt Ziva Riviera Cancun…
Ala ọmajiji siri ike kpara àgwàetiti Indonesia nke...
Ndị na-eme njem nlegharị anya Tanzania ugbu a na minista na-ahụ maka…
FLYING WALES: Ụgbọ elu ibu ibu n'ụwa
Ntuziaka agbataobi: Ihe 10 ị nwere ike ịmaghị...
Hawaii na -emepere ndị ọbịa maka njem nlegharị anya na ...
Njem nlegharị anya Jamaica: Nchekwa spa na ahụike na akwụkwọ ntuziaka ọhụrụ
JA Solar na-enye ọkụ eletrik ndụ ndụ maka egwuregwu na-abịa ...
Otu esi eme atụmatụ ma nwalee ngwa maka ichu nta azụ azụ gị?
Thailand niile na -emepe ndị ọbịa na -enweghị ...
Vaccine Booster J&J COVID na -enweta Green Light ugbu a
Mgbake na-enweghị isi n'ihu maka azụmahịa na mba ụwa ...
Facebook anwụọla, Meta ogologo ndụ!
Ndị njem si Poland: Seychelles adịla njikere maka…
Hawaii nke China: Sanya bụ onye ama ama n'ịntanetị ọhụrụ nke…
Ụgbọ elu Delta Air Lines si Prague na New York maliteghachi
Nje Virus COVID Monster ọhụrụ: na-ewepụ ọgwụ mgbochi, na-agbasa ngwa ngwa
Ụgbọ elu Ukraine na Tel Aviv na Ukraine International ...
Usoro njem ọhụrụ Seychelles n'ihi COVID-19 Omicron…
Mmadụ 41 nwụrụ, ọtụtụ na -efu na ndagwurugwu ala India ...
Usoro ụgbọ elu South African ụgbọ elu ọhụrụ: mgbanwe...